सर्वश्रेष्ठ मूल्यमा आईएमईआई द्वारा आईफोन अनलक गर्नुहोस्
यदि तपाइँ कसरी खोज्दै हुनुहुन्छ आईएमईआई द्वारा आईफोन अनलक गर्नुहोस् सबै ग्यारेन्टीहरूको साथ र सबै भन्दा राम्रो मूल्यमा, त्यसपछि यो एक्चुलिडेड आईफोन र लिबेरैफोनमेमीको विश्वासको साथ गर्नुहोस्। यो गर्नका लागि तपाईले आईफोनको अपरेटर, देश चयन गर्नुपर्नेछ र आफ्नो आईएमईआई प्रविष्ट गर्नुहोस्। यदि तपाइँ तपाइँको अपरेटरलाई थाहा गर्नुहुन्न वा यदि तपाइँको आईफोन चोरीको लागि रिपोर्ट गरिएको छ भने, तपाइँसँग यो सेवा पत्ता लगाउन पनि उपलब्ध छ।
1 यसलाई अनलक गर्न आईफोनको IMEI कसरी जान्ने?
2 कसरी IMEI द्वारा आईफोन अनलक गर्ने?
यसलाई अनलक गर्न आईफोनको IMEI कसरी जान्ने?
त्यहाँ धेरै विधिहरू छन् जुन हामीलाई अनुमति दिन्छ हाम्रो आईफोनको IMEI खोज्नुहोस्, कुनै एक मोबाइल फोनमा उपलब्ध एक सामान्यबाट सुरू गर्दै। सबै भन्दा राम्रो यस कोड पत्ता लगाउने तरिकाहरू तिनीहरू निम्न हुन्:
संख्यात्मक कीपैडबाट: हामी फोन अनुप्रयोग खोलेर, किबोर्डमा ट्याप गरेर र कोड प्रविष्ट गरेर यो प्राप्त गर्नेछौं * # 06 #। नम्बर स्क्रिनमा देखा पर्नेछ। बाहिर निस्कनका लागि हामी ठीक छुन सक्छौं।
आईफोन सेटिंग्स बाट: हामी सेटिंग्स / सामान्य / सूचना पहुँच गरेर र जहाँ हामी IMEI पढ्न सक्छौं तल स्लाइडिंग द्वारा हाम्रो IMEI देख्न सक्छौं।
आईफोन केस हेर्दै: यो सरल विधि हुन सक्दछ, जबसम्म हामीसँग बाकस नजिक छ। आईफोन आईएमईआई पछाडि स्टिकरमा छ र IMEI / MEID नम्बरको रूपमा देखा पर्दछ।
कसरी IMEI द्वारा आईफोन अनलक गर्ने?
आईएमई द्वारा आईफोन अनलक गर्नुहोस्एक्चुलिडाड आईफोन र लिबेरैफोनइआई द्वारा प्रदान गरिएको सेवाबाट यो सजिलो हुन सक्दैन। प्रक्रिया निम्न हुनेछ:
हामी स्पेन, संयुक्त राज्य अमेरिका वा मेक्सिको बीचको देश छनौट तालिका माथिको ट्याबमा क्लिक गरी सेवा प्रदान गर्दछ।
एक पटक देश चयन गरिएको छ, हामी हाम्रो आईफोन को मूल को अपरेटर को छान्नु पर्छ। यदि हाम्रो आईफोन अर्को अपरेटर वा देशबाट हो, हामी "अन्य अपरेटर्स" मा क्लिक गर्नेछौं र हामी देशहरू र अपरेटरहरूको धेरै विस्तृत सूची हेर्न सक्षम हुनेछौं। यो ध्यान दिनु पर्छ कि स्पेन को मामला मा, तपाईं सक्नुहुन्छ प्रमुख क्यारियरहरूबाट आईफोन रिलीज गर्नुहोस्s जस्तो वोडाफोन, ओरेन्ज वा मोभिसार अन्यहरू बीच।
अर्को, हामी आईफोनको IMEI प्रविष्ट गर्छौं जुन हामी पाठ तल बाकसमा रिलिज गर्न चाहन्छौं "यहाँ तपाइँको IMEI प्रविष्ट गर्नुहोस्।"
हामीले तलको बक्समा सम्पर्क ईमेल पनि राख्नुपर्नेछ «तपाईंको ईमेल यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस् '। ईमेल पूर्ण र मात्र प्रयोग गरीनेछ सूचित गर्नको लागि कि आईफोन पहिले नै अनलक भएको छ।
सेवाको लागि भुक्तान गर्न हामी पहेंलो बटनमा क्लिक गर्दछौं। हामी क्रेडिट कार्ड वा पेपैल मार्फत भुक्तान गर्न सक्छौं।
एक पटक भुक्तान भएपछि, हामी केवल पुष्टिकरण ईमेल प्राप्त गर्नको लागि प्रतिक्षा गर्न सक्दछौं जहाँ उनीहरूले हामीलाई बताउँदछन् कि आईफोन जारी गरिएको छ र कुनै पनि अपरेटरसँग प्रयोग गर्न सकिन्छ।
तपाइँ कसरी हेर्नुहुन्छ, प्रक्रिया अनलाइन आईफोन अनलक गर्नुहोस् यो सजिलो हुन सक्दैन। यदि तपाई के चाहानुहुन्छ टर्मिनलको रिलीज गर्नु अघि अपरेटरलाई थाहा पाउनु हो भने हामी यहाँ वर्णन गर्दछौं कुन कम्पनी आईफोन हो भनेर कसरी जान्ने.